Kate Middleton uur leedahay? Taageerayaasha Boqortooyada oo si qiiro leh u daba jooga ka dib 'the brood' 'hortooda carruurta - WAA LA SAMEEYAA
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Kate Middleton uur leedahay? Taageerayaasha boqortooyada waxay ku muujinayaan cabsi xoog leh ka dib markay ducadii 'brood' horteeda caruurta hortooda
Kate, Duchess of Cambridge horeba waa hooyo saddex caruur ah oo boqortooyo ah, laakiin waxaa ka buuxsamay warar xan ah oo sheegaya in iyada iyo Amiir William rabaa inbadan. Quruxda quruxda badan ayaa ka soo qeybgashay furitaanka beerta duurjoogta ah ee Royal Horticultural Society (RHS) oo ku taal magaalada Wisley shalay, halkaas oo ay ugu dhacday carruurta socod-baradka ah ee u soo dhowaaday dhacdada. Wayna ku qosleen yaryarkii albaabkii beerta.
Waxay gashanaysay dhar ubax qurux badan sida ay qoob-ka-ciyaarka carruurta kula ciyaarsiineysay beerta duurjoogta ah ee carruurta ku dhiirrigelisa inay ciyaaraan, ogaadaan oo ay ku nastaan ​​bannaanka.
Duchess wuxuu kujiraa aabeheeda hooyadeed wuxuuna tusay xirfadaheedii waalidnimo iyadoo lahadleysa caruurta oo xitaa madaxa kaga dhuftay gabadh yar.
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Sababta dhabta ah ee Kate Middleton waa mid ilaalinaysa markii Charlotte dugsiga bilaabayo
] Kate Middleton oo uur leh: taageerayaasha boqortooyadu waa kuwo liita ka dib markay tahay "xanta" ee guurka carruurta (Sawirka: GETTY)
Kariisad caan ah Mary Berry waxay ku biirtay Kate xaflada halkaas oo ay ku beertay geedo kedar buluug ah oo lagu calaamadeeyay furitaanka RHS Garden.
Marka laga hadlayo qiyaasta sii kordheysa ee ku saabsan uurka, buug-yareyaasha ayaa si weyn hoos u dhigay fursadaha Kate iyo Meghan Markle, kuwaasoo dhowaan ku dhawaaqi doona uur.
Meghan iyo Kate labadaba waxaa laga codsanayaa inay ku dhalaan 2020. Alex Apati oo ka tirsan Ladbrokes ayaa yiri, "Waxaan qorsheyneynaa sanad weyn oo loogu talagalay 2020 Royal Family, iyada oo aan hal midna ahayn laakiin labo lagu daro cusub oo muuqda sida muuqata wadada."
Uurka uurka Kate Middleton: Kate wuxuu garaacay madaxa taageere da 'yar (Sawirka: GETTY)
Kate Middleton Uur leh: Kate waxay la sheekaysatey carruurta intii lagu gudajiray caleemo saarka RHS Garden (Sawirka: GETTY)
Kate waxay qaadatay tallaabo muhiim ah usbuucii hore markii ay ka tagtay afartii sano-jir Princess Charlotte Center maalinkeedii koowaad ee dugsiga.  Hadda oo Amiir George iyo Princess Charlotte ay dugsiga ku jiraan, Kate waxay haysataa oo keliya Prince Louis, mid ayaa jooga guriga, oo leh waqti buuxa.
U go'naanta labada qof ee carruurta ah way iska cadahay waxayna ahayd wada shaqeyn lama huraan ah oo ku saabsan Soo noqoshada Mashruuca Dabeecadda ee dhiirrigelisay beertan cusub ee duurjoogta ah.
Read More : Princess Charlotte naaneysta: sababta Charlotte ay ugu lumin doonto naaneysigeeda "feisty" dugsiga
Uurka uurka Kate Middleton: Kate wuxuu ahaa dhiirigelinta Wisley's Garden Garden (Sawirka: GETTY)
Agaasimaha Fulinta RHS Sue Biggs ayaa uga mahadceliyay Duchess shaqadeeda. Waxay tidhi, Waa maxay sixir! Carruurtan waxay ku ciyaari doonaan meel lagu dhiirrigeliyo jardiinooyin ay isku-habeeyeen La Duchesse.
"Waxaan uga mahadcelineynaa Duchess saameynta cajiibka ah ee iskaashigan" Ku soo Noqo Nature ".
Waxaan shaki ku jirin in mashruucan, iyada oo loo marayo rabitaankeeda iyo aragtideeda, ay ku nuuxnuuxsatay in helitaanka deegaannada dabiiciga ah iyo meelaha cagaaran aysan ahayn oo keliya raaxo, laakiin sidoo kale waa lama huraan.
"Tani waa wax ay ERS si adag u rumeysan tahay oo ay sii wadi doonto inay difaacdo iyada oo ku sii socota Ololaheeda Britain iyo Sadaqada. "
Booba wuxuu ka qaaday rikoor cajiib ah warshadaha kufsiga Faransiiska